WordPress: Etu bulite na Embed PDF | Martech Zone
Omume nke na-aga n'ihu na-eto eto yana ndị ahịa m na-etinye ihe onwunwe na saịtị ha na-enweghị ịmanye atụmanya ịdebanye aha iji budata ha. PDFs kpọmkwem - tinyere akwụkwọ ọcha, ọmụmụ ihe, iji okwu, ntuziaka, wdg. akpaghị aka robotic akpaaka, Kọwaa Software.
Ebe ochie ha nwere bọtịnụ nbudata nke ndị ọbịa nwere ike pịa nke ga-ebudata ma mepee PDF ahụ ozugbo. N'ezie, ha nwere ike idezi bọtịnụ nbudata na nsuso ihe omume wee hụ nsonaazụ ya… mana nsogbu bụ na ha na-arụ ọrụ na ọtụtụ ọdịnaya ma ọ ga-achọ oge ọzọ iji depụta otu peeji isiokwu isiokwu ma ọ bụ tinye mkpado ihe omume dị mkpa na bọtịnụ nbudata ọ bụla.
Azịza ya dị mfe. Ọ bụrụ na anyị agbakwunyere PDF na onye na-agụ PDF, anyị nwere ike soro nyocha peeji dịka ibe ọ bụla n'ime Google Analytics. Ọ bụrụ na ị wụnye Edemede PDF maka WordPress, ị nwere ike ime nke ahụ. Anyị nwere ihe atụ na nke anyị ndebanye ahịa mkpọsa ahịa. Lee ihe ọ dị ka ibe:
DK New Media Mpempe akwụkwọ Azụmaahịa Ahịa
Nke a B NOTGH link njikọ nkwado ma ọ bụ njikọ mmekọ. Naanị m chọrọ ịkwalite nnukwu ngwá ọrụ maka WordPress!
Tags: adobeotúfanye pdfpdfWordPress
@dknewmedia Daalụ maka edemede gị n’etinye PDF! Mfe ịgbaso, rụọ ọrụ dị ka amara, na nke kachasị mma, ọ nyere aka dozie nsogbu. Bravo! Jide nke ọma.